Papilloma phezu iso. Izimbangela papillomas on the ijwabu leso nokususwa amasu
On the isikhumba leso zingavela izimila ezehlukene. Kungaba njengoba papillomas, warts senile, talc, futhi keratoacanthoma, nevi, fibroma, adenoma sebaceous. Ukuze uthole ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe kuyadingeka ukuze uxhumane onguchwepheshe.
Uma uqaphela yinhlama esikhumbeni ijwabu leso, akufanele azame ukuqeda le neziqu. Okokuqala, udinga ukuvakashela udokotela, zidlule lonke ucwaningo bese kuphela, kanye nodokotela wakho ukukhetha amacebo efaneleke kakhulu okwenzayo. It kuzoncika okwenzayo ukuze Ukwakha-up. Ngemva ukususwa papillomas ku iso akulona kwenziwe ukuze, isibonelo, angioma nevus noma Ota.
Ngaphandle kuhlolwe ngamehlo, udokotela angase aphikelele odlulayo biomicroscopy, ophthalmoscopy, bese ubamba futhi visometry perimetry. Futhi, uma ithola izindawo osolisayo ku onguchwepheshe ijwabu leso uzokuthumela on kwezidingo yokuhlaziya isiyonke umchamo futhi igazi sikhungo nophenyo lwe ugcunsula kanye ne-hepatitis. Futhi, uma kunesidingo, angakwazi ukuncoma ukuvakashela oncologist.
Ukuzwa kwehhovisi likadokotela ukuthi papilloma esweni, musa ukusheshe ukwethuka. A ukuqonda kangcono izimbangela ivelaphi. Ngakho, lezi zokwakheka zenzeka kwabantu abatheleleke nge uhlobo oluthile Papillomavirus womuntu (i-HPV). Kodwa lezi zimpawu zivamise ukwenzeka ngenxa amasosha omzimba aphansi. Khuphula igciwane ikani nokucindezeleka.
Kukholakala ukuthi papillomas akhiwa izindawo umonakalo isikhumba, lapho kukhona imifantu hairline kanye nezilonda. Kodwa izimila ku Isivalo avele, njengoba umthetho, ngaphandle ukulimala ngaphambi iso endaweni.
Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi papilloma ku iso - kuba inkinga abadala. Kodwa manje kuya nezesikhumba kanye Cosmetology ukufuna intsha. I Ochwepheshe umsebenzi - hhayi kuphela ukucacisa imbangela Ukwakha-up ke on the ijwabu leso, kodwa futhi ukuthola kungaba anomdlavuza.
Uma une papilloma emehlweni leminyaka, isinyathelo sokuqala zokubhekana nayo ukuphendukela onguchwepheshe. kokubonisana Ngaphambi nge abesifazane udokotela kuyinto efiselekayo ukusebenzisa izimonyo on endaweni ethintekile. Kuye imiphumela yocwaningo, impatho ukugcwala kwamanzi ku iso kungathatha wesikhumba, oncologist, noma beautician.
Isiguli bangase bakhethe indlela ukususa papillomas, kodwa munye kuphela kulawo ongakhetha ukuthi ngeke anikele udokotela. Phela, kuphela uchwepheshe owazi indlela yokwelapha kumele kwenziwe indlela okwakheke ngayo ezihlukahlukene.
Ngokwesibonelo, izindlela ezifana ethandwa ukubhekana warts njengoba electrocautery futhi cryosurgery ngokuvamile ezingamukeleki Kunconywa ukuba isetshenziswe iso, ngenxa yokuthi asebenza endaweni enkulu. Kodwa ungakhathazeki, kunezinye izindlela, indlela ukususa papillomas. Ngakho, excision kuhlinzwa noma laser ablation engenziwa.
Uma ndawonye nodokotela wakho unquma ukuthi kungcono uthintane ukuze udokotela ohlinzayo asuse Kusachutjekwa, ungase futhi uxhumane naye mayelana indawo lapho ukususa papilloma. Futhi, udokotela wakho angase akutshele mayelana izigaba inqubo. It wenziwa ngaphansi izinzwa wendawo. Ngemva lokungeniswa ngokusungula indlela yokubulala izinzwa, udokotela uhlola ngabe elahlekile izicubu ukuzwela. Uma lokhu kwenzeka, udokotela ohlinzayo nge ukusikeka nommese uvele yayifanekisela nomxhantela. On iso eziqhutshwa esikhulu sigqoka oyinyumba, okuyinto kufanele zishintshwe nsuku zonke. Kuyo yonke sonto, isiguli kumele abonise njalo udokotela ohlinzayo.
Ngemva izicubu ukuhlinzwa isuswe ingathunyelwa ahlolwe. Ingasetshenziselwa ukunquma isimila sase sikhule saba ingozi noma abulalayo.
Ukuze kutholakale ukuphulukiswa zenzeka ngokushesha futhi ngaphandle yezinkinga emva kokuhlinzwa kubalulekile ukuhambisana nayo yonke izincomo udokotela ohlinzayo. Ngakho, ukulimala okuholela endaweni lapho papilloma ubelokhu iso, kubalulekile ukuba asingathe isixazululo ephansi lokuhlushwa potassium permanganate. Ukuze ukuphuthumisa ukuphulukisa Ungaphinda usebenzise lotions ahlukahlukene kanye yokugcoba senzelwe kokuqina amanxeba.
Ngokuvamile, ochwepheshe batusa ukudla. Ukuze lokhu kufanele ayifakiwe ukudla Ukudla aqukethe Nezivimbelakuvunda kanye colorants. Futhi uwela ngaphansi kokuvinjelwa ethosiwe ukudla, inyama, emakha, ukudla okunamafutha.
Kubalulekile ukwaba okungenani amahora angu-8 ngosuku ubuthongo egcwele. Sincoma ukuthi ugweme ukucindezeleka nokubambelela umbuso kosuku.
Ungakhohlwa ukuthi ukusebenza ziwumthwalo eziningi imikhawulo. Ngakho, ngosuku lokuqala ngemva papilloma isuswe ngaphansi iso noma on the ijwabu leso, angeke wetted ngamanzi noma indawo ecacisiwe, noma iluphi olunye uketshezi. Ngemva ukubukeka nsundu ke noma kunjalo ayikwazi ukuba ukuzilimaza yokuhlanza. Imingcele khona isiguli elangeni. Yokuthamela ngaphansi imisebe ngqo akukwazi ngoba ngenyanga ngemuva othola ukuhlinzwa.
Umbuzo kanjani ukususa papillomas, esemgwaqweni amehlo nezinkophe, olufanele eziningi. Eyodwa yezindlela eziseqophelweni ukususa Kusachutjekwa ukusebenzisa laser. Kodwa kubalulekile ukukhumbula ukuthi kunezinhlobo ezimbili laser imishayo. Ezinye zazo isinyathelo uketshezi okungukuthi e izimila kwezicubu. Kodwa Site resection neziqu ezinkulu, futhi siyekele izibazi.
Laser ukususwa papillomas, okuyizinto phambi, aphethwe ngosizo imishini ekhethekile, okuyinto ethatha ezindongeni capillary ekhona nesalela. Kulokhu, ukuzungeza igazi ngaphakathi kubo eyeka nezicubu papillomas afe. Le ndlela kufanelekile laser ukususwa neziqu ebusweni, kuhlanganise amehlo. Ngemva ishiywe izibazi.
Izinzuzo indlela zihlanganisa ukuntuleka imikhawulo yobudala kanye contraindications.
Yokutakula emva kokwelashwa laser
Naphezu zonke izinzuzo izinto zobuchwepheshe obuphambili, nabo inezici ezithile ezingathandeki abalulekile. Uma unquma ukuthi papilloma yakho ijwabu leso amehlo kufanele kususwe nge laser, khona-ke kufanele kube ukulungele ukuqinisekisa ukuthi le nqubo kuba ngempela eqolo. Omunye ethile ubhekwa isisa yayo. Iziguli futhi kuqashelwe ukuthi, isikhathi yokutakula eside ngempela.
Kodwa ngesikhathi Ukwakha-up laser excision isiguli akaphelelwa ikhono emsebenzini. Phela, ngezitsha impatho enjalo uphawu isilonda ngakho kwakhiwa kuchitheka igazi futhi akusho ibakhathaze sobala.
Ngaphambi kokunquma inqubo, bakubuza ukuthi ukususa papilloma nge laser edolobheni lakho. Ungazihluphi ukubheka izibuyekezo mayelana imitholampilo oyikhethile noma ubuhle izikhungo. Okuwukuphela kwendlela yokuthola indawo engcono lapho ungakwazi masinya sifeze inqubo ukususa izimila.
Izici yokuziphatha kweziguli warts amehlo nezinkophe
Ukuthola at excrescences ku Isivalo, akubona bonke ukusheshe onguchwepheshe. Kodwa bathemba ukuthi papilloma ku iso izodlulisa bebodwa, bangaphazanyiswa ngaphandle, akudingekile. Libuye efiselekayo uyeke ukuhlola izindlela ezehlukene Folk yokulwa lezi neziqu.
Ngisho noma wena fan oshisekayo imithi ehlukile, kusenzima akudingekile ukuba ufune izindlela zokuziphindiselela ababezibheka ka ukususa neziqu ku Isivalo. Ngemva amacebo abakhethiwe kahle kungabangela ukulimala ulwelwesi lwamafinyila kwamehlo noma kuholele ekukhuleni papillomas.
Ngezinye okuvela iyiphi izimila kufanele kwenzeke ukuvikela amehlo. Kungenxa yokuthi lokhu, abesifazane kufanele uyeke ezihlotshaniswa nokusetshenziswa kwezimonyo ekukhuleni papillomas.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, ukunakekelwa okukhethekile kufanele ikhokhwe ekuthuthukiseni izivikeli mzimba. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuya ukudla okufanele, kungenzeka ekuqaleni ungacimi. Udokotela wakho angase akunikeze inkambo izidakamizwa elwa namagciwane futhi immunostimulatory.
Pharyngitis: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Epstein - uBarr igciwane ezinganeni, izimbangela weni nasekwelapheni tifo
Indlela esiphatha ngayo inyumoniya kahle
Aicardi syndrome: incazelo, uphethwe, ukwanda.
Izimpawu isifo: ingemuva. Izimpawu izifo ezinkulu ingemuva
Indlela ukupheka unyaluthi iphalishi e multivarka "Polaris"? zokupheka Simple futhi kufinyeleleke
Inja eDenishi eshisayo: izimfihlo zokupheka
I ukuhahaza phakathi nenkathi yokukhulelwa? imikhiqizo Safe kusukela emphinjeni ngesikhathi sokukhulelwa
Lisho ukuthini igama elithi kwegama uSolomoni? Umsuka, isiphetho umthelela
Mosquito eluma: i-smear isikhumba
Indlela yokwenza ubumba "ku-Maincraft" nokuthi ungayibheka kuphi
Kuyini wenzuzo zinhlobo zayo
Uxhumano ka strip LED: indlela yokukwenza kwesokudla
Umtholampilo inthanethi - esheshayo futhi elusizo
Amabili ithoni izinwele umbala: izithombe, imishini kanye nokubuyekeza
"Gcina ulimi lwakho emva kwamazinyo akho" (phraseology): incazelo nokusetshenziswa
Amatreksudi kwabesifazane - ukubukeka emuhle njalo